2 Ndị Eze 5 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
2 Ndị Eze 5:1-27
5 Otu nwoke bụ́ Neaman,+ onyeisi ndị agha eze Siria, bụ onye ukwu n’ihu onyenwe ya, bụrụkwa onye a na-akwanyere ùgwù, n’ihi na ọ bụ site n’aka ya ka Jehova mere ka Siria nweta nzọpụta;+ nwoke ahụ bụkwa dimkpa, bụrụkwa dike, ọ bụ ezie na ọ bụ onye ekpenta. 2 Ndị Siria pụrụ dị ka ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga,+ ha wee si n’ala Izrel dọrọ otu nwatakịrị nwaanyị n’agha,+ o wee na-anọ n’ihu nwunye Neaman. 3 Ka oge na-aga, ọ sịrị+ nne ya ukwu: “A sị nnọọ na onyenwe m nọ n’ihu onye amụma+ nọ na Sameria! Ọ ga-agwọ ya ekpenta ya.”+ 4 Otu onye wee bịa kọọrọ onyenwe ya, sị: “Lekwa lekwa ihe nwata nwaanyị ahụ si n’ala Izrel kwuru.”+ 5 Eze Siria wee sị: “Jikere ka ị gawa! Bịa, ka m zigara eze Izrel akwụkwọ ozi.” O wee gawa, were+ talent ọlaọcha iri na puku mkpụrụ ọlaedo+ isii na uwe mgbanwe+ iri. 6 O wee wetara eze Izrel akwụkwọ ozi+ ahụ, sị: “Ozugbo akwụkwọ ozi a ruru gị aka, lee, eziteworo m gị Neaman bụ́ onye na-ejere m ozi, ka ị gwọọ ya ekpenta ya.” 7 O wee ruo na ngwa ngwa eze Izrel gụrụ akwụkwọ ozi ahụ, ọ dọwara+ uwe ya ozugbo, sị: “Àbụ m Chineke,+ nke na ọnwụ na ndụ dị m n’aka?+ N’ihi na onye a ziteere m ozi ka m gwọọ mmadụ ekpenta ya; biko, tụleenụ ihe a, hụrụ otú o si na-achọ m okwu.”+ 8 O wee ruo na ngwa ngwa Ịlaịsha bụ́ onye nke ezi Chineke nụrụ na eze Izrel dọwara uwe ya,+ o zigaara eze ozi ozugbo, sị: “Gịnị mere i ji dọwaa uwe gị? Biko, ka ọ bịakwute m, ka o wee mara na onye amụma nọ n’Izrel.”+ 9 Neaman wee jiri ịnyịnya ya na ụgbọ agha ya bịa guzoro n’ọnụ ụzọ ụlọ Ịlaịsha. 10 Otú ọ dị, Ịlaịsha zigaara ya onye ozi, sị: “Ị gaa ebe ahụ, mikpuo+ onwe gị ugboro asaa+ na Jọdan ka ahụ́ wee dị gị mma;+ ka i wee dị ọcha.” 11 Neaman wee wee iwe+ lawa, sị: “Lee, asịrị m onwe m,+ ‘Ọ ga-apụta bịakwute m, ọ ga-eguzokwa ọtọ wee kpọkuo aha Jehova bụ́ Chineke ya, fegharịa aka ya n’ebe ahụ wee gwọọ onye ekpenta.’ 12 Ọ̀ bụ na Abena na Fapa, bụ́ osimiri ndị dị na Damaskọs,+ akaghị mmiri niile dị n’Izrel mma? Ọ̀ bụ na mụ enweghị ike imikpu onwe m na ha wee dị ọcha?”+ O wee tụgharịa jiri ọnụma lawa.+ 13 Ndị na-ejere ya ozi wee bịa gwa ya, sị: “Nna m,+ a sị na ọ bụ oké ihe ka onye amụma ahụ gwara gị, ọ̀ bụ na ị gaghị eme ya? Ma ya fọdụzie na ọ sịrị gị, ‘Mikpuo onwe gị na mmiri wee dị ọcha’?” 14 O wee gbadaa, mikpuo onwe ya ugboro asaa na Jọdan dị ka onye nke ezi Chineke+ kwuru, anụ ahụ́ ya wee lọghachi dị ka anụ ahụ́ nwata,+ o wee dị ọcha.+ 15 O wee laghachikwuru onye nke ezi Chineke,+ ya na ndị niile so ya, wee bịa guzoro n’ihu ya, sị: “Lee, amatawo m ugbu a na e nweghị Chineke n’ebe ọ bụla n’ụwa ma e wezụga n’Izrel.+ Ugbu a, biko, nara ohu gị onyinye m wetara iji gọzie+ gị.” 16 Otú ọ dị, ọ sịrị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ bụ́ onye m guzo n’ihu ya, agaghị m anara ya.”+ O wee malite ịrịọsi ya ike ka ọ nara ya, ma ọ nọ na-ajụ. 17 N’ikpeazụ, Neaman sịrị: “Biko, ọ bụrụ na ị gaghị anara ya, ka e kponye ohu gị ájá,+ nke ịnyịnya ibu abụọ ga-ebu; n’ihi na ohu gị agakwaghị esure àjà nsure ọkụ ma ọ bụ chụọrọ chi ọzọ àjà ma e wezụga Jehova.+ 18 Ka Jehova gbaghara ohu gị n’ihe a: Mgbe onyenwe m ga-abata n’ụlọ Rimọn+ ịkpọ isiala n’ebe ahụ, o wee dabere+ n’aka m, o wee bụrụ na m ga-akpọ isiala+ n’ụlọ Rimọn, mgbe m kpọrọ isiala n’ụlọ Rimọn, biko, ka Jehova gbaghara ohu gị n’ihe a.”+ 19 O wee sị ya: “Laa n’udo.”+ O wee si n’ebe ọ nọ lawa garuo ebe dị anya. 20 Gehezaị+ bụ́ onye na-ejere Ịlaịsha onye nke ezi Chineke+ ozi wee sị: “Lee, nna m ukwu ahapụwo Neaman+ onye Siria nke a n’anaraghị ya ihe o wetara. Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ m ga-achụwa ya wee nata ya ihe.”+ 21 Gehezaị wee chụwa Neaman. Mgbe Neaman hụrụ onye na-achụ ya, o si n’ụgbọ ịnyịnya ya rịdata ozugbo ka o zute ya, o wee sị: “Ọ̀ dịkwa mma?”+ 22 O wee zaa, sị: “Nsogbu adịghị. Ọ bụ nna m ukwu+ zitere m,+ sị, ‘Lee! Ụmụ okorobịa abụọ ndị si n’etiti ụmụ ndị amụma+ esiwo n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu bịakwute m ugbu a ugbu a. Biko, nye m otu talent ọlaọcha na uwe mgbanwe abụọ.’”+ 23 Neaman wee sị: “Ngwanụ, were talent abụọ.” O wee na-arịọsi ya ike,+ mesịa kechie talent ọlaọcha abụọ n’akpa abụọ, tinyere uwe mgbanwe abụọ, wee bunye ha mmadụ abụọ n’ime ndị na-ejere ya ozi, ka ha wee buru ha na-aga n’ihu ya. 24 Mgbe o rutere Ofel, ọ naara ha ihe ndị ahụ ozugbo wee debe ha n’ụlọ ma gwa ndị ikom ahụ ka ha lawa. Ha wee lawa. 25 Ya onwe ya batara wee guzoro n’akụkụ nna ya ukwu.+ Ịlaịsha wee sị ya: “Gehezaị, olee ebe i si?” Ma ọ sịrị: “Onye na-ejere gị ozi agaghị ebe ọ bụla ma ọlị.”+ 26 O wee sị ya: “Ọ̀ bụ na m amaghị mgbe nwoke ahụ tụgharịrị ka ọ rịdata n’ụgbọ ịnyịnya ya izute gị? Ugbu a ọ̀ bụ oge ịnara ọlaọcha ma ọ bụ ịnara uwe ma ọ bụ ubi oliv ma ọ bụ ubi vaịn ma ọ bụ atụrụ ma ọ bụ ehi ma ọ bụ ndị ikom na-eje ozi ma ọ bụ ndị inyom na-eje ozi?+ 27 N’ihi ya, ekpenta+ Neaman ga-arapara n’ahụ́ gị na ụmụ gị ruo mgbe ebighị ebi.”+ O si n’ihu ya pụọ ozugbo wee ghọọ onye ekpenta nke na-acha nnọọ ọcha.+